Ikotishi elithokomele elifudumele elineLake Access
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Nancy Et Reno
Sizokwenqaba zonke izimfuno zezilwane ezifuywayo.
Izinkathazo zempilo, ngiyabonga.
Idokhi ingakwazi ukuhlalisa izikebhe kufika kumafidi angu-16.
Siyakwamukela ensimini yethu encane yase-Edene!
Izinze phakathi kwezihlahla ezindala kanye nothango lomsedari obude obungamamitha ayi-12, leli kotishi linikeza ingadi yangasese efudumele kakhulu nethokomele egcina isedokhini lakho elinomfula ongasemfuleni ofinyelela eLake Memphrémagog. Ngena esikebheni sakho noma i-kayak yakho futhi uhlole ubuhle beLake Memphrémagog, i-Castle brook noma i-Cherry River marsh.
Imizuzu eyi-10 kuphela ukuya enkabeni yedolobha likaMagogi onama-pub endawo, izitolo nezitolo zegrosa. Imizuzu eyishumi ibheke kolunye uhlangothi kuneMount Orford Provincal Park edumile enendawo ethandwayo yokushushuluza kanye nenkundla yeGalofu, ingasaphathwa eyeNordic Spa eyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka emnyango wethu.
Ingaphakathi le-chalet linesitayela esiyingqayizivele esidinga ukuzola nokuphumula. Inegumbi lokugezela elilungiswe ngokuphelele elineshawa yejethi eminingi. Amakamelo amabili okulala anethezekile angasese, elilodwa elinombhede olingana no-Queen ogcwele kanye negumbi lesibili elinemibhede yabantu ababili. Ikhishi elifakwe ngokugcwele ngomshini wekhofi. I-chalet ibuswa indawo enkulu yomlilo yesitayela esidala edlula nje ukuphumula!
Siyakhathalela ukukunikeza indawo ehlanzekile neyamukelekayo.
Sinenhlalakahle yakho enhliziyweni!
Ithebula lepikiniki lomsedari eliwusayizi omningi elingakwazi ukuhlala abantu abayi-6-8 ukuze bathole ukuphumula noma ujabulele ukudla kwakho okwenziwe nge-BBQ.
Ungaphumuza onqenqemeni lwamanzi noma ulethe ibhayisikili lakho ukuze uthole imigwaqo emikhulu eluhlaza.
Isifunda sakwaMagogi yilapho isitayela esidala samaNgisi esithembekile sihlangana nesiko langempela lesiFulentshi. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna uhambo lomndeni, indawo yokucasha yothando noma nje indawo ongazisonga ngencwadi enhle, woza uzojabulela ikhoneni lethu elincane lepharadesi!
Buyela emuva futhi uzenze ekhaya!
Ngibheke ngabomvu ukuhlangana nawe,
UNancy, uReno noLaurence
4.88 ·327 okushiwo abanye
4.88 · 327 okushiwo abanye
Izolile futhi ithule, indawo kamakhelwane ayinazo izibani zomgwaqo ngakho izinkanyezi zinhle!
Ibungazwe ngu-Nancy Et Reno
Sihlala emgwaqeni ofanayo nekotishi ngakho-ke sizokujabulela ukukubingelela mathupha futhi sikubonise nxazonke.
UNancy Et Reno Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 273361